‘प्रधानमन्त्री र प्रदेश गृहमन्त्रीको गृह जिल्लामा हामी बलियो छौं’ –सुमनसिंह पौडेल, इन्चार्ज झापा जिल्ला नेकपा (विप्लव)
सुमनसिंह पौडेल सरकारद्धारा प्रतिबन्धित नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका झापा जिल्ला इन्चार्ज हुन । पछिल्लो समय झापाबाट यो पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा हाम्रोखबर डट कमका लागि पत्रकार राजु पोख्रेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
पछिल्लो समय तपाईहरुका धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन, के अब झापाबाट विप्लव नेकपा सकिएको हो?
यो अनावश्यक तर्क हो ! जब सम्म अन्याय अत्यचार, शोषण , दमन र जनताका बिचमा राज्यले संकट लादिरहन्छ तब सम्म पार्टी सकिंदैन । पार्टी त बिचार र दृष्टिकोणसंग संम्बन्धित हुन्छ । हाम्रो दृस्टिकोण दलाल पुँजिवादी सत्तालाई ध्वस्त गरेर बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हो । त्यसो हुंदा पार्टी सकियो भनेर हल्ला चलाउनु भनेको फोहोरमा हरियो झिंगा हुन्मुनाए जस्तै हो । दुषित सोच, दृष्टिकोण र छोटो दिमाग भएकाहरुको कल्पना मात्र हो । हो , हाम्रो पार्टीका केही नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो समय हाम्रा जिल्ला सेक्रेटरी ‘मनिस’ पक्राउ परेपछि यस्ता हल्ला चलाउन खोजियो, तर झापाली जनताले यसलाइ पत्याएनन् । किन कि जनतालाइ थाहा छ, झापामा हाम्रो संगठन मजबुत छ । सबै स्थानीय तह, सेलसम्म हाम्रो कमिटी छ । झापाका उत्पीडित जनता हाम्रोसाथमा छन । हाम्रो पक्षमा दलालहरुले कल्पना गरेको भन्दा संयौ गुणा बढी जनता छन । केही मान्छे समातेर हाम्रो संगठन सकियो भन्नु भनेको आंफुले गरेका अपराधदेखि डराएका दलालहरुले चित्त बुझाउने कपोकल्पित तर्क मात्र हुन । झापामा हामी बलियो छौं, यहिनै सत्य हो । उत्पिडित जनता एमाले, कंग्रेस खोजेर हिंडेको देख्नु भएको छ भने मलाइ भन्नुस । जनताले जनसरकार खोजिरहेका छन । बलिदान गर्न तयार कार्यकर्ता केपी ओलीको पार्टीमा देख्नु भएको छ ? तर हाम्रो पार्टीमा हामी सबै मर्न तयार भएर हिंडेका छौं । दृष्टिकोण हाम्रो बलियो, कार्यकर्ता हाम्रो बलियो, जनता हाम्रो पक्षमा अनि हामी सक्किएर केपी र पिकेहरुको पार्टी चैं दरो भयो ? यस्तो होइन झापामा सबै भन्दा शक्तिशाली हाम्रो पार्टी छ । जताबाट मुल्यांकन गरेनी हुन्छ । प्रतिबन्ध लगाएर, राज्यको बन्दुक दुरुपयोग गर्नेलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौ, हामी माथि लगाईएको प्रतिबन्ध हटाईयोस, हामी २० औं हजार युवाले झापाको बिर्तामोडमा मार्चपास गराईदिन्छौ । हजारौं जनमुक्तिसेनाको मार्च पास गराइदिन्छौं ।
बन्दुक र बम पड्काउँदै, अनि जग्गा कब्जा गर्दैमा क्रान्ति हुन्छ? जनतालाई कहिलेसम्म दुख दिने?
वास्तवमा बन्दुक र बम पड्काउदैमा र जग्गा कब्जा गर्दैमा क्रान्ति हुने होइन् । तर बिद्रोहमा ती सबै हुन्छन त्यो स्वाभाविक हो । हामीले कहीँ पनि बन्दुक र बम पड्काएका छैनौ तर जनताले भने प्रतिरोध गरिरहेका छन , जनताले गरेको विद्रोहमा हाम्रो पूर्णसाथ रहेको छ । हामीले बम पड्काएका हैनांै र हामी आतंक पनि मच्चाउदैनौँ । हामी सबै भन्दा बढी शान्ती चाहान्छौं, अशान्ती र युद्ध त राज्यले थोपरेको छ नि । राज्यको कारण भएका छन जे जति भएका समस्या हरु, तर हामीलाई जवरजस्ती आरोप लगाइएर आफू उम्कन खोजिरहेको छ । यो सम्भव छैन, जनताले बुझेका छन ।
तपाई झापामा हामीले बम पड्काएको हैन भन्नुहुन्छ तर तपाई कै नेताहरुले जिम्मा लिनुहुन्छ, के तपाईंहरुबिच तालमेल छैन?
पछिल्लो समय साहारा नेपाल र गौरादह नगरपालिकाको गाडीमा बम विस्फोट हुँदा हाम्रो नाम जोडियो । मिडियाका साथीहरुले सोधेपछि हाम्रो सेक्रेटरीले जनताको साथमा हामी छौं भन्ने प्रतिकृया दिनु भएको थियो । तर मिडियाले जिम्मा लियो भनेर हल्ला गरिहाले । त्यस्तो होइन ।
हिजो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पाटीले पनि यस्तै कुरा गरेर विद्रोह गरेको थियो । अहिले सत्ताको मालिक छ, के तपाईहरुलाई पनि सत्ता चाहिएको हो?
प्रचण्डले पनि अहिले हाम्रा जस्तै कुरा गरेर त्यो पूरा नगरि दलालको गुलाम बन्न पुगे । दलालहरुको सेवामा तल्लिन भएर लागिरहेका छन । त्यही भएर हामी तिनै जनताका कुरा फेरि उठाउन बाध्य छौं । हामीले सत्ताकै कुरा भनेका हौं, तर प्रचण्डको जस्तो जनतालाई रुवाउने दलाल पुंजिवादी सत्ता होइन, जनतालाइ सुख दिने बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता भनेका छौं । लडाइँ सत्ताकै हो, र यो जनताले आफ्नो सत्ता निर्माण नगरुन्जेल चल्छ । हामी जित्छौं, देशले जित्छ, देशभक्तहरुले जित्नेछन । यो देशलाई बिश्वकै नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुर्याउनेछौं । बिश्वकै उत्कृष्ठ जनता भएको राष्ट्र बनाएरै छाड्छौ । वातावरण बन्दै गएको छ। धैर्यता गरौं, निरन्तर पहल गरौं ।
तपाईहरुमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ, यति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीको जिल्लामा काम गर्न सहज छ त?
हामीलाई कुनै गाहे छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पनि १४ बर्ष जेल बस्नु भएको हो, हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौ तर अब उहाँहरु बुढा हुनु भयो । उहाँहरुले ‘रिटायर्ड’ जीवन बिताउनु पर्छ । केपी ओलि, हिक्मत कार्कीहरुलाई मेरो सुझाव छ , उहाँहरुले हिजो उत्पीडितहरुको मुक्तिको निम्ति गर्नु भएको आन्दोलन पक्कै पनि आज दलालहरुका महोत्सव र ब्यापारीक कार्यक्रमको रिबिन काट्नलाइ थिएन । जनताले ठूलो आशा गरेका थिए, आशा सबै बेकार भयो । अझै केही बिग्रिएको छैन, हिजो जनतालाइ बाँडेका सपना सम्झनुस् । बैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद दलालहरुका चाकरी गरेर आउँदैन । निर्ममतापूर्वक कम्युनिस्ट संस्कार लागू गर्दा मात्र सम्भव छ । आउनुस् मिलेर गरौं, बूढो अनुभव र युवा जाँगर मिलाउन सकियो भने राम्रो परिणाम आउँछ । दलाल पुंजिवादको अन्त्य गरेर बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने एकीकृत जनक्रान्तिको बिषयमा बहस गरौं । त्यो इमान्दारिता हुनुपर्छ भएन भने जनताले, समयले पत्तासाफ गरिदिन्छ । केही दलाल माफियाहरुको कुरा सुनेर हाम्राबिरुद्ध लाग्नु भएको छ, यसले कसैलाई फाईदा गर्दैन त्यसो नगर्न अनुरोध छ मेरो ।
अन्तमा के भन्नु हुन्छ?
हामी जनताका अधिकारका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं । हामी प्रहरीलाई पनि आग्रह गर्छौ, हाम्रा साथीहरुलाई झुटा मुद्दा लगाएर समात्ने काम बन्द गर्नुहोस् । र आम झापाली जनतालाई अन्यायको बिरुद्ध गोलबद्ध हुन आग्रह गर्छु । क्रान्तीको प्रकृयामा सभागी हुन अनुरोध छ । दलाल सत्ताको अन्त्य अनिवार्य छ, त्यसको बिकल्पको बिषयमा आम नागरिक, देशभक्त, क्रान्तिकारी, राष्ट्रपुँजीपति बर्ग सबै एकाकार हुन जरुरी छ । झापामा हामी सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छौं,अझै बलियो बनौं दलालहरुलाइ हराउनुपर्छ ।